Muxuu yahay ujeedka Muqdisho keenay Saraakiil ka socota Waaxda Difaaca Mareykanka ? – Bandhiga
Muxuu yahay ujeedka Muqdisho keenay Saraakiil ka socota Waaxda Difaaca Mareykanka ?
Waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi ka socda Wafdi ka socday Wasaaradda Gaashaandhigga dowlada Mareykanka kuwaa oo kulan kula qaatay xafiiskiisa Wasiirka Gaashaandhigga xukuumada Somalia Xasan Cali Maxamed oo ay wehliyaan xubno uu qeyb-ka ahaa Wasiir-xigeenka Wasaaradda Cabdullaahi Colaad Rooble.
U qeybsanaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliyaa Arimaha Gaashaandhigga Col. Lan Murray ayaa wafdigan hogaaminaya waxaana wehlinaya saraakiil ka katirsan waaxda difaaca Mareykanka ee loo yaqaano Pentegon.
Kulanka wasaaradda Gaashandhigga la qaadatay mas’uuliyiintan ayaa waxa ay kaga wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya labada Wasaaradood iyo sidii loo soo xoojin lahaa.
Mas’uuliyiintan ayaa ka dooday dagaalka lagula jiro kooxda Al-shabaab iyo kuwo ka la mid ah iyo tayeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo la qorsheynayo iney amniga dalka kala wareegeen ciidamada AMISOM iyo qodobo kale.
Waxaa xusid mudan in Maraykanka boqolaal askar ay ka joogaan Soomaaliya kuwaa oo la dagaalamaya Al shabaab kana qeyb qaata tababarrada ciidanka xoogga dalka.